fampitandremana: Hadisoana raha nandefa ny pake QUERY. PID = 784 ao /home/admin/web/info-all.com/public_html/wp-includes/wp-db.php amin'ny tsipika 2056
Mofomamy ovy - fomba fahandro
Betsaka ny olona no mahatadidy ity mofomamy ity hatramin'ny fahazazany. Ho an'ny hafa, ho zava-baovao izany. Saingy tsy maninona izany fa ny zava-dehibe dia matsiro izy! Alaivo ny recette!
Ditties momba ny fitiavana
Izy ireo dia nampiala voly sy nampiala voly ny taranaka mihoatra ny roampolo! Mahafinaritra kokoa noho ny meme, mahatsikaiky ary mahafaly kokoa!
Ho an'ireo tia vazivazy sy anekdote manokana, dia nanomana anecdote vaovao maro izahay.
Fomba ahazoana karpa amin'ny tehina manjono
Trondro mahaliana sy matsiro ny karpa, saingy tsy mora izany. Inona no fomba mety hisamborana karpa amin'ny tehina fanjonoana?
Inona ny toetr'andro mety amin'ny trondro?
Ireo mpanjono, manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, dia mahazo karpa daholo, ity trondro ity dia tsy matsiro fotsiny, fa tena mahaliana koa rehefa misambotra azy. Andao hojerentsika ny fiantraikan'ny toetrandro amin'ny jono karp.
71 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 903,504.